Fety fialan-tsasatra ho an'ny tena manokana
fianakaviana, mpivady, zavatra ilaina
Amin'ity taona ity, ny areti-mandringana Covid-19 dia kasaina hijerena ny fiakaran'ny fijanonana rehefa miovaova ny fialan-tsasatra any ivelany ny mpitsangatsangana Irlandaina amin'ny fialan-tsasatra manakaiky ny trano. Ny fialantsasatra ho an'ny tena manokana dia manome ny mpitsidika ny fahalalahana hametraka fandaharam-potoana fialan-tsasatra manokana, menio ary teti-pialan-tsasatra. Ora iray monja miala an'i Dublin i Kildare dia manolotra trano be dia be ho an'ny fikarakarana tena avy amin'ny trano fialan-tsasatra lafo vidy, ho an'ireo efitrano fialofana sy zaridaina fitobiana. Eto Into Kildare dia manome anao ny safidy ambony indrindra hikarakarana sakafo ao amin'ny distrika:
Ilay rendrarendra Kilkea Castle Estate & Golf Resort dia miorina ao amin'ny Co. Kildare ary nanomboka tamin'ny 1180. Ora iray monja avy eo Dublin no misy azy ary mariky ny tantara Irlandey lehibe io. Kilkea Castle dia tranon'ny FitzGerald's, Earls of Kildare, fa ankehitriny dia trano fandraisam-bahiny mahafinaritra izy ankehitriny miaraka amin'ny hatsaran-tarehy mistika an'ny Castle 12 lehibe taonjato faha-140. Voaravaka amin'ny haitraitra sy ny fomba tsy manam-paharoa Kilkea Castle dia vonona ny handray ny fandraisana Irlandey mafana ho an'ireo vahiny manerantany. Ary koa misy efitrano fandraisam-bahiny 180 misy, Kilkea Castle dia manolotra Self Catering Lodges izay vahaolana mety tsara amin'ny Self Isolation miaraka amin'ny fianakaviana na olon-tianao. Misy efitrano fandraisam-bahiny roa sy telo azo anaovana fidirana manokana ary misy fidirana feno mankany amin'ny tokontany XNUMX hektara an'ny Resort.
Antsoy: + 353 59 9145600
Toeram-pisakafoanan'i Ashwell Self Catering dia fananana nankatoavin'ny Fáilte Irlandy manana kintana 4 manana ny toerany any amin'ny ambanivohitra mahafinaritra an'i Johnstown Co. Kildare. Ilay trano bongo mihaja dia matory olona enina ary misy efitra fatoriana enti-miasa telo sy lakozia feno fitaovana. Ity trano fikarakarana ho an'ny tena ity dia telo kilaometatra monja miala ny tanànan'ny be olona any Naas ary izy no toerana mety indrindra hijerena ny distrikan'i Kildare mahavariana. Manakaiky ny fivarotana izany, ny trano fisakafoanana manolotra serivisy fanalana, fisarihana ivelany sy lalan-tongotra sy bisikileta. Mialà sasatra amin'ny hariva fahavaratra miaraka amin'ny afo misokatra ao amin'ny trano bongo ary miala sasatra amin'ny fiadananan'ny tontolo ambanivohitra na mitsangatsangana rehefa hariva amin'ny lalan'ny firenena mahafinaritra mankany an-tanàna. Ny trano bongo misy koa milina fanasan-damba sy fanamainana, fanasana vilia ary fahitalavitra miloko. Natolotra maimaim-poana ny lambam-pandriana sy ny lamba famaohana.
Antsoy: 045 879167
Yarda azo antoka ao amin'ny Burtown House & Gardens
Teraka dia fiampitana eo amin'ny tantara, lova, zaridaina, zavakanto ary vokatra voajanahary vanim-potoana avy hatrany amin'ny zaridaina. Ao Burtown izy ireo dia liana amin'ny zavatra nohaniny sy ny nihaviany, ary rehefa mijanona ao Burtown ny ekipa dia manantena ny hanome aingam-panahy, hiala sasatra, hampiala voly ary hahatonga anao hahatsapa ho tsara. Trano tokotanin-tsambo dia miorina amin'ny zaridaina tokotany tokontany, miorina ao an-tokotanin'ny Burtown House and Gardens manan-tantara. Naorin'i Quakers tamin'ny 1710, izy io dia iray amin'ireo trano roa ao Kildare tamin'ny taonjato faha-18 mbola tsy namidy. Ny Stable Yard House dia mety ho an'ny olona 6 mijanona ao amin'ny efitrano fatoriana telo. Misy efitra fandroana roa misy fandroana roa sosona misy fandroana orana lehibe misaraka, ary koa efitrano fandriana ambany rihana misaraka. Afaka miditra malalaka amin'ny zaridaina rehetra ny vahiny, ary koa ny zaridaina tokotany, kianja filalaovana tenisy, ary valan-javaboary sy fitsangantsanganana manodidina. Azo atao koa ny mividy vokatra biolojika ao amin'ny zaridaina an-dakozia, ary koa The Green Barn, izay trano fisakafoanana voajanahary, fivarotana sakafo ho an'ny artisan, faritra fivarotana, miaraka amina galeriana maromaro. Ny lakozian'i Stable Yard izay misy fitaovanao amin'ny Aga sy fitaovanao mahandro efa napetraka. Amin'ny alàlan'ny fandaminana mialoha dia azo alamina ny sakafo hariva voatokana.
Antsoy: 059 862 3865
Ankafizo ny traikefa fijanonana Irlanda marina amin'ity toerana manaitra ity Robertstown Holiday Village. Eo am-pijerena ny Grand Canal, Robertstown Self Catering Cottages dia miorina ao amin'ny tanàna milamina ao Robertstown, akaikin'i Naas any amin'ny County Kildare amin'ny faritra Irelands Midlands sy ny faritra Atsinanana. Betsaka ny zavatra mahaliana azo atao sy jerena eto amin'ny Kildare. Ankafizo ny mandeha an-tongotra, golf, jono, sambo lakandrano, trano Irlandey, zaridaina ary maro hafa eo am-baravaranao. Ny toeram-ponenana dia adiny iray monja miala ny seranam-piaramanidina Dublin, seranan-tsambo Dublins. Ao amin'ny Robertstown Self trano fialan-tsasatra fikarakarana miaina fahitana mahatalanjona any ambanivohitra Irlandy ny vahiny. Ity faritra ity dia manana sary miavaka sy tsy manam-paharoa manomboka amin'ny The Plains of the Curragh ka hatrany Bog of Allen. Ity no mety indrindra amin'ny fialantsasatra ao amin'ny fianakaviana, fitsangatsanganana am-pitiavana na fivorian'ny fianakaviana. Miaraka amin'ny kilometatra maro amin'ny lalana mitaingina Canal mankany meander an-tongotra, fitsidihana lehibe hitondrana fiara na hiala sasatra mora amin'ny seza fisotroana, Robertstown no toerana tokony hisy. Omena hamperabaina ho an'ny vahiny ary misy tapakila fihenam-bidy sy fanomezana ho an'ny manintona eo an-toerana, ary koa karatra fihenam-bidy VIP ho an'ny Kildare Village & Newbridge Silverware.
Details: Ireo trano fidiovana manokana dia matory vahiny 5 farafahakeliny isaky ny trano kely. Ny fijanonana farany ambany dia 5 alina mandritra ny vanin-taona mafana.
Rates: Jona / Jolay / Aogositra amin'ity vanim-potoana ity dia 550 €
Antsoy: 045 870 870
Forest Farm Caravan sy Park Park
Forest Farm Caravan sy Park Park dia kintana telo, tranokala nahazo fankatoavana Bord Failte ary manolotra karazana trano hipetrahana ho an'ny tranona maotera, mpivaro-mandeha ary toby. Serivisy feno izy io ary miorina amin'ny toeram-piompiana fianakaviana mahafinaritra any South Kildare, 5 km miala ny tanànan'i Heritage any Athy ary 55km miala an'i Dublin. Ny toeram-piompiana miasa dia manana hazo Beech sy Evergreen matotra mahafinaritra. Io toerana io no mahatonga azy io ho toby fitsangatsanganana an-kalamanjana ho an'ireo manintona eo akaikin'ny zaridaina japoney, ny National Stud ary ilay toerana malaza Horse Racing any Curragh. Azo alaina akaiky ny toeram-pilalaovana golf, misy taranja 18 Hole ao Athy, The Curragh ary Carlow izay misy radius 15 kilometatra daholo. Ny renirano Barrow sy ny Grand Canal dia samy mamakivaky an'i Athy, ka mikarakara ny mpikatroka Coarse sy Game. Anisan'izany ny: Fandroana mafana mafana, tohotra sarotra, fidiovana, vata fampangatsiahana, lakozia Campers, herinaratra 13A ary efitrano fandraisam-bahiny lehibe.
Price: Toerana manomboka amin'ny € 10 isan'alina. Ny lehibe € 5 sy ny zaza latsaky ny 12 € 4 isan'alina. Maimaimpoana ny 2s.
Antsoy: 059 8631231
Fonenana ao an-tokotany Belan Lodge
Fialantsasatra fialan-tsasatra any Belan Lodge dia ampahany amin'ny fananana trano Belan mahafinaritra. Any amin'ny tokotanin'ny trano nohavaozina no misy ny trano fialan-tsasatra manome trano honenana akaikin'ny trano fiompiana taonjato faha-17. Ny fananana dia tototry ny tantara taloha ary afaka mahita ringfort taloha ianao ary Millrace tany am-piandohana teny am-pandehanana namaky ilay trano. Heverina fa i Ebenezer Shackleton dia namily ny 300m farany an'ny Millrace avy tao amin'ny River Greese mankany amin'ny renirano akaiky. Ny 4 kintana Self Catering Lodges dia samy manana ny fatana afovoany sy ny fatana fandoroana solika ary ny trano fandriana tsirairay dia voaravaka tamim-pandinihana sy tamina fanomezana milay sy milamina, nefa ankehitriny. Ankafizo ny dia mamakivaky ny faritra ambanivohitra Kildare tsara tarehy izay mbola tsy simba ary mandehandeha eny amin'ny lalana mankany Moone High Crosse Inn (daty fanokafana iharan'ny fameperana). Misy efitrano efitrano efatra azo anofana, miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray sy roa izay misy amin'ny habe sy ny endriny samy hafa.
Antsoy: 059 8624846
Hevitra momba ny datin'ny Kildare miaraka amin'ny fahasamihafana
Ireo zavatra dimy mahatsiravina indrindra tokony hatao ao Kildare amin'ity Halloween ity
Zavatra tsara hatao any Kildare rehefa avy ny orana